Macalinka kooxda qaranka ee Holland oo loo badinayo inuu leyliyo kooxda Barcelona kadib… – Hagaag.com
Macalinka kooxda qaranka ee Holland oo loo badinayo inuu leyliyo kooxda Barcelona kadib…
Posted on 18 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Warbixino ay soo saareen warbaahinta Dutch-ka ayaa lagu sheegay maanta oo Talaada ah, in macalinka kooxda qaranka ee Holland Ronald Koeman uu ku dhow yahay inuu qalinka ku duugo qandaraas uu ku tababarayo kooxda Barcelona muddo seddex sano ah, waxaana ilo ka tirsan naadiga daaha ka qaadeen in wadahadalada macalinkan ay bilowdeen markiiba kadib guuldaradii kooxda ka soo gaartay Bayern Munich 8-2.
Wargeyska Isbaanishka ee Mundo Deportivo ayaa laga soo weriyey in maareeyaha guud ee kooxda Barcelona Oscar Grau uu mar horeba ku sugnaa Netherlands si shaqsi ahaan ula gorgortamo mas’uuliyiinta xiriirka kubada cagta ee Holland, iyo inuu heshiis la gaaro wakiilka Koeman ee la xiriira saxiixa oo ah muddo labo sano ee ma aha seddax sano sida ay sheegeen wargeysyada Holland.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in heshiiska Koeman ee kula jiro xiriirka kubbada cagta ee Holland, kaasoo soconaya illaa dhamaadka koobka qaramada Yurub, kaasoo dib loo dhigay sanadka soo socda, waxaana ku jira qodob u saamaxaya Koeman inuu ka tegi karo hadii ay dhacdo inuu helo dalab uu ku tababaro Barcelona.
Ma qarsan tababarahan 57-sano jirka ah tababarida kooxda Barcelona inay u tahay riyo, halka warbaahinta Dutch-ka ay qortay in uu dareensan yahay in fursaddan aan soo noqon doonin ayna tahay in uu ogolaado hoggaanka kooxda reer Spain.
Go’aanka Koeman wuxuu noqon karaa mid sahlan marka loo eego shaki ku saabsan mustaqbalka kubada cagta caalamiga ah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Waxaa jira shaki ku saabsan qabashada kulamada Nations League ama qaramada bisha soo socota sababo la xiriira kiisaska corona virus oo kor u sii socda Yurub, iyo sidoo kale dib u dhigista Koobka Horyaalnimada Yurub ee sannadka dambe.
Koeman wuxuu xirfadiisa tababarenimo ka bilaabay 1998 magaalada Barcelona – isagoo markii hore ka ahaa xiddig kooxda, markii dambena kaaliye u noqday tababare Louis Van Gaal.
Dhanka kale, waxaa ka dhex socda guddaha naadiga Barcelona shaqo ka ceyrin, kadib markii lagu dhawaaqay shaqo ka ceyrinta tababare Setien, sidoo kale kooxda ayaa ku dhawaaqday maanta oo Talaado ah in shaqada laga ceyriyay ciyaartoygii hore iyo agaasimaha isboortiga naadiga Barcelona Eric Abidal, isagoo loo jeediyey mahadcelin.
Abidal – oo ahaa daafacii hore ee Barcelona isla markaana laba Champions League kula guuleystay kooxda reer Catalan – ayaa hayay jagada agaasimaha isboortiga ee naadiga in kabadan labo sano.